Kwimpompo ye-slurry impeller kunye nangaphakathi kwe-casing zihlala ziveliswa kwi-slurry kwaye kufuneka zikhuselwe ngokufanelekileyo ngokuchasene nokunxiba. "Ukukhetha izinto ezinqwenelekayo kunye nokufakwa kwisamente kubalulekile njengokukhetha impompo ngokwayo!" Kukho iimeko ezintathu ezahlukeneyo ezenza ukunxiba kwislu ...
Impeller yi-Rotor, ejikelezayo kwimpompo ye-centrifugal. Ngaphambili nangemva kwemigca yokupompoza iivanes ezinciphisa ukubuyiswa kunye nokutywina ukungcola. Isinyithi esomeleleyo kunye nezinto ezibunjiweyo ze-elastomer ziyatshintsha ngokupheleleyo. Phosa kwimisonto yokuhambisa ngaphandle akufuneki kufakwa okanye amandongomane. Ukusebenza okuphezulu ...
Xa ukumpompa islurries esirhabaxa ayingombuzo wokuba uya kudinga indawo yokupompa islryry kunye nokunxiba iinxalenye- ngumbuzo wokuba nini. Ngeenkqubo ezihlanganisiweyo ngokupheleleyo kunye nezisombululo zonikezelo ezilulutho senza lula uluhlu lwempahla, ukuhanjiswa kunye nokufakwa kweendawo zempompo oluludaka kunye neendawo zokugcina izinto zethu ...